Firefox browser ine logo nyowani ... kana iwe ukashandisa iyo Nightly vhezheni | Linux Vakapindwa muropa
Iyo nyowani icon yeFirefox yave kuwanikwa… kana iwe ukashandisa iyo Nightly vhezheni
pablinux | | Zvirongwa
Mukutanga kwaJune, Mozilla isu akapa nhau: Firefox yakanga isisiri browser. Zita reizvo muchiSpanish zvaizoshandurwa se "gava remoto" rakava chiratidzo chakakomberedza Tumira (kutumira mafaera), Monitor (kutarisa kuti magwaro edu ari munjodzi), Lockwise (password password) uye Browser (bhurawuza re hupenyu hwese). Zuva irori takapihwawo mucherechedzo uyo nhasi watinogona kuona mune… semi-official way.
El logo nyowani yave kuwanikwa, asi kwete sezvatinotarisira. Iyo yazvino vhezheni yakagadzika yeiyo browser ndeye 68.0.1, ine yakanyanya-ku-kudhara beta iri 69.0b12. Mune imwe yenyaya dziri pamusoro apa hatikwanise kuona logo sezvazvichave mune ramangwana. Hongu tinogona kuzviona muhusiku vhezheni, parizvino 70.0a1 (2019-08-11), asi pane musiyano uri pachena uye zvirokwazvo watofungidzira kuti chii.
Firefox Nightly yatove neiyo logo nyowani ... asi iri yebhuruu
La Husiku vhezheni Bhurawuza raFox, zvirinani izvozvi, maviri pamusoro peshanduro yakagadzikana. Mozilla haitomboiti "Firefox" mune dzimwe nzvimbo, senge mu "Rubatsiro," panoti "Nezve Husiku." Iri mu usiku hwoga hwoga uko kwavanoyedza ese mashandiro, uye iwo avanofunga kuwedzera kubrowser enda kubeta, uko bhurawuza yatogamuchira zita rayo chairo. Nhasi, mushure mekuvandudza kune iyo vhezheni yakaburitswa nezuro, ini ndaona kuti icon yacho yanga yakasiyana uye yatoshandisa logo nyowani, asi neruvara rwebhuruu rinoshandiswa nehusiku.
Izvozvi zvataona logo muvhezheni yebrowser, isu tine mubvunzo: vachashandisa shanduko yegumi (69-> 70) kuwedzera iyo icon nyowani? Pakutanga, zvese zvinoita kunge zvinoratidza kuti ndizvo, asi Mozilla inoyambira kuti shanduko dzatinoona muNightly dzinogona kusvika yakagadzika vhezheni yeFirefox ... kana kwete. Chero zvazvingaitika, vashandisi vehusiku vanogona ikozvino kunakidzwa neiyo nyowani logo mubhuruu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Iyo nyowani icon yeFirefox yave kuwanikwa… kana iwe ukashandisa iyo Nightly vhezheni
Pindura ku hacklat